BUTTERCUPS: HALABUURKA, BOGSASHADA GURYAHA, ISTICMAALKA IYO KA HORJEEDA - DHIRTA DAWOOYINKA
Buttercups waa mid ka mid ah ubaxyada ugu quruxda badan ee dabeecadda abuuray. Waxay isku xirxiraan kuwa aan ku haboonayn: xoog iyo daciifnimo, faa'iido iyo waxyeelo, nolol iyo dhimasho, daawo iyo sun. Ubaxyo huruud ah oo aad u qurux badan ayaa soo jiitay dad badan.
Buttercup (Ranunculus) wuxuu sheegay in Dioscorides (I century AD) uu ku jiray daaweyntiisa. Riyooyinka qadiimka ah ee Scandinavians iyo Slavs ee la xidhiidha ubaxa burcadka leh ee ilaahyada Odin iyo Perun. Jiilaalka Dhexe, dib-u-cunceynta geedaha canjeerada ayaa loo tixgeliyey daawo ah barar.
Laga soo bilaabo sunta sunta leh ayaa la diyaariyay (dhallinyarada Juliet waxay qaateen xoogaa hurdo oo laga sameeyay subag). Buunshaha beerta, qarnigii 16aad ee ka yimid Turkiga ilaa England, muddo dheer ayaa ku muransan xaqqa Rose ah in loo tixgeliyo calaamadda Boqortooyada Ciraaq. Qiyaastii 600 nooc oo ah caleemaha Buttercups ayaa maanta degay adduunka.
Ma taqaanaa? Magacyada masoobirku sidoo kale waa mid cajiib ah. Magaca Laatiin ee circa "Ranunculus" wuxuu ka yimid "rana" - rahmo. Buttercup, sida rahyahanka, ayaa doortay boodh ah oo qoyan, qoyan qoyan oo ku noolaan kara biyaha. The Slavs ayaa naanaystey "subag" oo loogu talagalay sunta, "lute". Ubaxa wuxuu leeyahay magacyo kale - ilig sun ah, indhoole habeenkii ah, dabool, midabka kulul, iliga ramada iwm.
Qaababka iyo qaababka daaweynta ee burcadka
Noocyada noocyada burcadka ayaa ah in dhirta oo dhan ay ku sumoobaan hal shahaad ama mid kale. Waxay isku mid yihiin kiimikada, laakiin qaab kasta oo shakhsi ahaan ah, guryaha qaar ayaa laga yaabaa.
Kabadhada caleenta iyo cagaha ku jira protoanemonin (C5H4Oh2) - Dhinaca aan caadiga ahayn (alkaloid) qadhaadh dhadhanka.
Dareeraha sare, suntaas khatarta ah - waxay leedahay saameyn neuroparalytiga ah (xuubka xuubka ayaa la saameeyaa, habka wadnaha iyo neef-mareenka ayaa la joojiyaa, taas oo ka dhalatay dhimashadu ay dhici karto).
Haddii ay ku dhacdo maqaarka ama boogaha, waxay keenaysaa necrosis unug (necrosis). Saameynta alkalooskani wax yar ayaa leh saameynta soo horjeeda, bogsashada:
wuxuu kiciyaa nidaamka dareemayaasha;
waxay kordhisaa difaaca;
tirada unugyada dhiigga cas oo kordhaya;
maadada loo yaqaan "pathogenic microbes" waa la burburiyaa.
Koontada waxaa ku jira:
xayawaanka dhiigga, ma sameysma xinjir dhiig;
waxay ka hortagtaa horumarinta unugyada kansarka;
Kobcin faytamiin PP.
dhiirigelinta masaafurinta marka qufacayo;
yeeshaan saameyn ba'an;
ka hortagga burburinta hyaluronic acid (hubinta caafimaadka ee kilyaha);
saaro xagjirnimo lacag la'aan ah oo jirka ka timaada;
ilaaliya maraakiibta xididada.
Tannins oo ku jira bacaha maqaarku waxay ilaaliyaan maqaarka, siiyaan maadada maraakiibta. Marka laga soo tago kor ku xusan, abuurka burcadka waxaa ku jira saliidaha, stem iyo caleemaha - arginine, carotene, asparagine, acid ascorbic, iwm.
Guryaha daaweynta - daawada qaaxada, bakteeriyada (E. coli, staphylococcus viral), horumarinta wadajirka, iwm.
Ma taqaanaa? Kacbada macaanka (magaca labaad waa indhoole habeenkii) waa wakiilka ugu dheer ee noocyada. In dhererka, waxay koraa ilaa 1 m. In kasta oo magaca, dhirta this ma keeno indho la'a ee digaagga, laakiin haddii ay casiir ku hesho on xuubka dheecaanka, waxay waxyeello kartaa.
Isticmaalka burcadka ee daawada dhaqanka
Dadku waxay muddo dheer isticmaaleen sifooyinka bogsashada ee burcadka si loo daaweeyo cuduro iyo xanuuno badan.
Dadka ugu caansan daawada dhaqameed - Sunta rasaasta. The caleemaha fareeshka, dhaldhalaalaan iyo casiir ah ee dhirta this hodan casiir.
Ma taqaanaa? Beerka dabiiciga ah wuxuu leeyahay miraha aan awoodin in ay qoyaan, dabaasha oo aan biyo ku daadin sababtoo ah villi daboolaya iyaga, iyo qoryaha hawada ee diirka of seed.
Sababtoo ah maadada sare ee sumowga, waxaa la isticmaalaa burcadka oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurrada dibedda oo kaliya: casiirku waxaa lagu qasi karaa biyo waxaana lagu daboolaa maqaarka (la dagaallanka caarada isnadaamiska). Xalalka liito waa la isticmaalaa dSi aad u dhaqdid xabuubka isha, dhejinta nabarrada.
Marka laga hadlayo maqaarka maqaarka rooti caleemaha jarjaran oo la jarjaray ayaa caawin doona - malacadku way fidsan yihiin, booguhu way furmi doonaan.
Ka saar xargaha Waxaad awoodi kartaa, marar dhowr jeer ku dul daadanayo juuska laga soocayo jirida maskaxda.
Buttercups ayaa loo isticmaalaa ee daaweynta qaaxada maqaarka (waxaad u baahan tahay 3 qaado oo ah dhirta la jarjarey ku dar 0.5 litir oo biyo ah karkaraya kuna adkeyso 3 saacadood).
Laga soo bilaabo muruq xanuun Caawinta khamriga loo isticmaalo ee caag ah (50 ubax halkii 0.5 litir). Waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato saddex toddobaad meel meel gudcur ah, ka dibna tuujin oo xaddid, samee cadaadis.
Maraq baradho ah cirifka ciridka bogsiiyo - waxaa lagama maarmaan ah in lugaha cagaarka maalin kasta (hal galaas oo cagaaran ah halkii litir oo biyo ah karkariyo, kari ilaa 3 daqiiqadood oo ku adkeyso 30 daqiiqo). Buttercup wuxuu ka caawiyaa laabotooyinka.
Waa muhiim! Diyaargaroobidda decoctions iyo infusions in la cuno, waa in aad isticmaashaa oo keliya qalabka ceeriin qalalan (alkaloids waa in uumi iyo uumiga ayaa baabi'in doona).
Daawada dhaqameed waxay kaloo isticmaashaa decoctions iyo infusions si loogu daaweeyo cudurka sanbabada, neefta, cudurrada dumarka, kalkaalisada, jimicsiga, iwm.
Haddii aad ku shubtid nus koob oo ah khudaar la qalajiyey leh 0.5 litir oo biyo ah karkaraya oo ku adkeysanaya darmuus, waxaad heli doontaa tincture for the wash oo leh qumanka ama qummanaanta.
Tincture Buttercup sida dayactirka hernia Diyaar ahaan sidan oo kale: 50 g oo ubaxyo qalajiyey cadaan ama cadaan qabow ku adkeyso 0.5 l vodka 7 maalmood gudahood mugdiga (waxaad u baahan tahay inaad ruxayso maalin kasta).
Maalin walba qaado qiyaasta cuntada ka hor cuntada ka hor.
Gubasho gubasho Waxay muddo dheer ka caawisay miisaanka (sababtoo ah maaddada sare ee guurka iyo gamma-lactones): waxay ku dhufteen 2-3 dhibcood oo casiir ah galaas biyo ah waxayna cabbeen saddex jeer maalintii hal bil.
Dukaanka qulqulaya waxay yareyn kartaa kaneecada duumada (subaxdii waxaad u baahan tahay inaad gashato caleemaha cagaaran ee xididdada (jilbaha, curcurada) - iyo fiidkii habeenkii ma dhici karto.
Buttercup Flowers Aamirsan si loogu daaweeyo caabuqa qanjidhada. Si aad u diyaariso cadarku waxay qaadataa ubaxyo (qalajiyey) iyo qayb ka mid ah midabkeed. Dhir daaweedku u baahan yahay in la gooyo budada iyo isku qasan afar qaybood oo ah subagga la kariyey. Cirbadaha lafdhabarta ah waa in la kariyaa laba jeer maalintii.
Waa muhiim! Isticmaalida madaxbannaan ee daawooyinka laga helo burcadka lagu sameeyay sida laga soo qaato daawooyinka dhaqameed ee dhaqameed, iyada oo aan la tashan dhakhtar waxay yeelan kartaa cawaaqib culus - dhammaan walxaha ku jira waxaa ku jira sun!
Codsiga burcadka ee daawada xoolaha
Daawada caafimaadka xoolaha, isticmaalka burcadka ayaa caadiyan loo isticmaalaa. Dhibaatooyinka ku habboon ee daaweynta waxaa lagu aasaasay xarumo caafimaadka xoolaha ah iyada oo ay ku shaqeynayaan dhakhaatiirta xoolaha (loo isticmaalo tinctures, xal, decoction of buttercup, iwm.).
Xanuunnada dabiiciga ah iyo kuwa nadiifka ah ee nadiifka ah ee fardaha, lo'da, iyo idaha ayaa la siiyay daaweynta ugu guulaha badan. hoofka cayayaanka, necrobacillosis, caabuqyada boogaha, boogaha, iwm.
Ma taqaanaa? "Folk" Masiixiyaddu waa hodan halyeeyo ah oo ku saabsan burcadka: Masiixa wuxuu Maryan la siiyey xiddigaha, u rogay burcadka, sida calaamad muujinaysa jacaylkiisa. Buttercup ayaa ka soo jeeda shaydaan, oo ku dhuumanayay ubaxyada, isaga oo ka cararaya Archangel Michael.
Beerka iyo digirta
Blooming of buttercups ee May-June waa halis ah in bees ah sababtoo ah joogitaanka guntosin guncoside iyo lactone of proonemonone, kuwaas oo ku jira manka iyo nectar. Bees waa sumoobeen, ma duuli karaan, dabeyl ku hareeraysan dhulka, waxaa jira dad badan oo ku dhintay hareeraha, dhammaan qoyska shimbiruhu way baaba'an karaan.
Tan waxaa loo yaqaan 'pollen toxicosis', 'cudurro', iwm. Haddii uu jiro dufan yar oo dabayshu ku xigto apiary, markaas waa lagama maarmaan:
ka saartaa somatorams ka ah finan iyo quudiyo bees leh sharoobada sonkorta ilaa 2 maalmood;
Isu ururi shinni saameyn ku leh dusha qolof leh lakab khafiif ah, meel meel gudcur leh oo diiran, ku rushee sharoobada diiran (3 qaybood oo biyo, hal sonkor);
ku xoqo tuubooyinka lakabka ah, haddii ay suurtogal tahay, bedel meesha kudka.
Sida qiyaas ka hortag ah, meel u dhow apiary, dhirta caleemaha waxaa lagu beeray horay, marka bacaha ubaxu ka soo baxo aagga, shinni waxaa lagu quudinaa sharoobada sonkorta (200-300 g halkii qoys).
Sidee loo adeegsadaa bacaha loo isticmaalo beeraha
Beeraha, barkinta ayaa ah mid aan qiimo lahayn. Taas bedelkeeda, marka xoolaha daaqsinka ah (lo'da, idaha, yaraa fardo yar) ee cawska daadadka, meelaha ay degaan iyo meelaha qoyan, xayawaanku waxay ku sumoobi karaan burcadka.
Sababtoo ah sumoobidda, mareenka dheef-shiidka iyo kelyaha ayaa la saameeyaa, xanuunada dareemayaasha ayaa muuqda (xayawaantu waxay ku dhacdaa, gariirku wuxuu bilaabmaa), iyada oo aan daweynin waqtigeeda (ka saaridda sunta caloosha leh xalalka alkaline), dhimasho ayaa dhici karta.
Sunta sunta ah waxaa loo gudbin karaa calafka caano. Si looga hortago sumowga daaqa, daaqa waa in la hubiyaa bacaha.
Marka la hayayo marka cawska la qalajiyo qorraxda, alkoolajiyo alkoolaa ayaa uumi baxaya, iyo bacaha qallalan waxay noqdaan kuwo ku habboon quudinta lo'da.
Sida loo keydiyo alaabta ceeriin ee cayayaanka ah laga bilaabo subagga
Buttercups waxaa la goostay ujeedooyin daaweyneed bishii Juun (inta lagu jiro dhamaystirka ubax). Qaybta dhulka ee geedka ayaa la jarjaraa oo la gooyaa (5-7 cm dhulka korkiisa). Goynta waxaa si fiican loo sameeyaa gacmo gashi.
Jeexjeexinta burcadka ayaan lagula talin (waxaad yeeri kartaa juice iyo dhaawici nidaamka xididka ubaxa). Markaad jarjaraysid, waa inaad isku daydaa inaad ka fogaato taabashada juice on xuubka xuubka, ha u ogolaan in aad taabato maqaarka muddo ka badan 15 daqiiqo (waxaad heli kartaa maqaarka maqaarka).
Iska yaree dhirta waxaa lagu dhajiyay hal lakab oo la qalajiyay meel qallalan oo qoyan (sariiro, caleemo ama hoostood). Ka hor inta qalajinta dhirta ma aha in dhulka la dhigo. Badeecadaha qallalan waxay si sahlan dhulka ugu galeen. Ku kaydi alaabta ceeriin ee caanaha laga soocayo kabadhada waraaqaha xaashida ee meel qallalan oo aan ka badnayn hal sano.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la qalajiyo burcadka qorraxda furan - qorraxda qoraxda ayaa dili doonta dhamaan walxaha firfircoon, iyo ugu horreyntii, protoanemonin.
Khilaafaadka iyo taxaddarrada
Xaddidaadda isticmaalka mukhaadaraadka laga sameeyo burcadka:
uurka iyo naas-nuujinta;
dulqaad shakhsi ah oo ku saabsan maaddooyinka ku jira burcadka.
Way fududahay in lagu sumo leh faashad: Haddii ka dib qaadashada tincture ee ubax burcad ah, caloosha ayaa xanuunaysa, lallabbo ayaa u muuqata, garaaca wadnaha wuxuu bilaabmayaa "boodada" - si loo dedejiyo ama loo yareeyo, ambalaasku waa in si dagdag ah loogu yeero (calaamadaha soo socda waxay noqon karaan qalal iyo lumid miyir la'aan).
Kahor intaan la gaarin dhakhtarrada, waa lagama maarmaan in la matago matag sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, caloosha ku dhaq biyo biyo manganese ahna qaado dhuxusha dhaqdhaqaaqa.